Isdhexgal liita ee ka aloosan dalkan Iswiidhen oo baaritaan lagu caddeeyey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Nada Al-Qaisy, Elin Selig, Robert Allen iyo Fares Amedi. Sawirle: Michael Berwick/Sveriges Radio
Isdhexgal liita ee ka aloosan dalkan Iswiidhen oo baaritaan lagu caddeeyey
Iswiidhen way ku liidataa habka is-dhex-galka
La cusbooneeyay måndag 19 november 2012 kl 11.58
La daabacay måndag 19 november 2012 kl 09.03
Cilmi-baaris lagu sameeyey jaamicadda Istockholm ayaa lagu soo ban-dhigay in dalkan iswiidhen kaalin liidata ka galay hoowlaha is-dhexgalka. Baaritaankaasina oo la isu barbar-dhigay 15-dal ee ka mid ah waddammada Yurub. Caalinka Ryszard Szuilkin ayaa isu barbar-dhigay muddada ey soo-galootigu shaqada ku galaan tobanka sannadood ee ugu horeeysa kolka ey waddan soo caga-dhigtaan.
Soo-galootiga soo galey dalka Iswiidhen ayey tiradoodu ka liitaan kuwooda ka mid noqdey suuqa shaqada toban snnadood dabadeed, marka loo barbar-dhigo waddammada kale ee dhaca Yurub, sida uu sheegay caalinka Ryszard Szuilkin.
Cilmi-baaristan ayaa dalkan Iswiidhen loo barbar-dhigay waddammo ey ka mid yihiin Ingiriiska, Jarmalka, Faransiiska, Talyaaniga Noorway iyo Danmark, halka uu dalkan Iswiidhen middaasi ka galay kaalin aad u liidata. Waxaana halkaa ka soo bidhaantay in dalka Isbaaniya oo keliya kaga liito shaqa-la’aanta heysata ragga ajaaniibta iyo dalka Faransiiska oo kaga liita shaqa-la’aanta haysata haweenka ajaaniibta.
Dalka Iswiidhen ayey shaqa-la’aanta haysata ajaaniibta dalka soo gasha ey tobanka sannadood ee ugu horeeyaa gaarsiisan tahay ragga 23%, halka haweenkana tahay 27%, sida cilmi-baaristan lagu ogaaday, waana tiro aad u sareeysa oo ey muddo dheer ku qaadato soo-galootigu sidii ey suuqa shaqada uga mid noqon lahaayeen.
Cilmi-baarista ayaa sidoo kale lagu ogaadey inuu is-bedel dhaco toban sannadood dabadeed, kolkaasina oo kaalinta dalkani aad kor ugu kacdo, marka loo barbar-dhigo waddammadaa iyadoona ey tirada shaqa-la’aanta soo galootigu gaarsiisan tahay 11% ragga iyo dumarkaba.
- Waxaa la oran karaa haddii dhanka wanaagsan loo fekero iney ku qaadato muddo dheer sidii soo-galootigu suuqa shaqada uga mid noqon lahaayeen, hase kuwooda ugu firfircoon ey muddadaa dabadeed kaalintooda ka helaan oo ey buuxiyaan.
Waa sidee haddii dhanka aan wanaagsanayn loo fekero?
- Dhanka aan wanaagsanayn haddii loo macneeyo waxaa la oran karaa in tirada aan wanaagsaney ee suuqa shaqada dibadda ka joogaa ey muddo dheer sii socon doonto, sida uu sheegay Ryszard Szuilkin.
Mid ka mid ah waxyaabaha lagu macneeyn karo in soo-galootiga dalkan ku sugan uu kaga liito dhanka shaqada waddammada Yurub ayaa ah iyada oo ajaaniibta dalkan soo gashaa u badan yihiin magan-gelyo-doon, halka waddammada loo barbar-dhigey ey yimaadaan dadyoow la soo shaqaaleeyey.
Waxey ku qaadaneysaa muddo ka dheer in soo-galootigu qeyb ka noqdaan suuqa shaqada, kolka ey dalka soo caga dhigtaan, waana howl lagu guul-dareeystey, sida uu sheegay Ryszard Szulkin.
- Shkahsigu u iman maayo iyada oo shaqo ey u diyaarsan tahay. Hase yeeshee kolka uu ruuxu shaqa-la’aan ku sugnaado shan, lix ama sannado ka badan waa guul-darro, sida uu sheegay.
Imisa ayay kugu qaadatay inaad ku shaqa bilowdo?